Ukulanda - ii-Geofumadas
Ukukhuphela kwezicelo ezikhuthazwa yi-Geofumadas okanye iimveliso zomdla jikelele
Namhlanje siza kubonisa iincwadi kunye neempapasho ukuqonda inkqubela phambili kwezobuchwepheshe kwintsimi ye-geo-ingqineli kunye nefuthe layo kwimpilo yemihla ngemihla. Zonke iinketho zikhululekile kwaye zilula ukuyifumana. Ukujongana nokukhula okubonakalayo kwitheknoloji esetyenziselwa indawo ye-geospatial, kubalulekile ukugcina ihlaziywe ukwenzela ukuba igalelo lethu lomsebenzi liyaqhubeka ...
Indlela yokukhuphela i-AutoCAD 2018 - inguqulelo yemfundo
Iinguqulelo zemfundo ze-AutoCAD zisebenza ngokupheleleyo, zombini kubafundi nootitshala. Ukukhuphela i-AutoCAD, kufuneka ulandele amanyathelo alandelayo: 1. Fumana iphepha le-AutoDesk. Faka i-akhawunti yakho okanye wenze entsha. Kumele ukhethe ikhonkco lokukhuphela kwi-version yezemfundo: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Ene kweli phepha, ndikhetha oko ...
I-Visual Basic yeZicelo ziluhlu lweelayibrari ezenziwa nguMicrosoft, zidala kodwa zinamandla kakhulu kwiinguqu ze-Ofisi phambi kwe-2010. Nangona iqhubeka ikhona, ezininzi iinkqubela phambili zenziwe kwi .NET nakwezinye iimeko; kunjalo, ukwenzela ukuphuhlisa okusekelwe kwi-marcros, i-VBA yi ...
Gcina ithempulethi ye-UTM kwi Geographies ekukhuthazeni iiGofumadas
Ngethuba elincinci siza kunika itemplate "Ukuguqulwa kwee-UTM zokuhlela kwiiGographic", ukukhuthaza iiGofumadas. Ngeli template ungangena ukulungelelanisa i-UTM, njengomzekelo: X = 1,740,564.29 Y = 3,396,718.08, ebonisa indawo ye-19 ngasentla. kunye ne-Spheroid ye-GRS80, kwaye ngenxa yoko uya kufumana ububanzi nobude kwidigri, imizuzu kunye nemizuzwana yesayizi nje ...
Ukulanda, Geospatial - GIS
Station Total Manual Sokkia Series 50 in Spanish
Ekuhambeni kwexesha eyadlulayo bahamba umzuzwana ujonge le ncwadi, iinyanga emva kokuba ufumene mna umfundi kwaye lifikile. Ukubuyisa ububele, nanko ndikulengile ukuze ukwazi ukuyikhuphela. Le manual somqhubi, igosa Sokkia ngeSpanish, kusetyenziswa izixhobo: Series50RX SET250RX SET350RX SET550RX SET650RX Series50X SET250X SET350X ...
Ukulanda, GPS / Izixhobo, Topography
Le ngenye yeempapasho zokugqibela apho kufuneka ndisebenze khona. Ingcaciso echazayo ukuba nangona yenziwe yimixholo, inokuba luncedo kwamanye amazwe kuloo msebenzi olukhuni wokuchaza i-cadastre kwinguqu abantu-abangaphezulu okanye abangaphantsi. I ...
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo umfundi ndicela ukuba Basic Guide to Ukusebenzisa MobileMapper 100. Ngokuqhelekileyo ezi iincwadi abasendleleni disk ukuba ihamba kunye nezixhobo ezithengwe Ashtech, nayo kumagama isiJamane, isiFrentshi, IsiNgesi: xM100 & 200Platform_GSG_B_es.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_de.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_fr.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_en.pdf Kodwa imposiso umntu kufuneka abe sele udubule ...
Ukulanda, GPS / Izixhobo
I-BiblioCAD isayithi equle inani elixabisekileyo leefayile ezilungele ukukhuphela. Ungayisombulula ngokulula xa wenza iprojekthi okanye usinike iingcamango ezintsha malunga nendlela yokuphuhlisa ngayo. Makhe sibone ezinye iimeko: Sithatha inkcukacha yesikhangu se-zunchada esinqununu, sinombono we-isometric, sinqunywe kwaye sityalo. Sidinga iibhloko zabantu, imithi okanye ...
AutoCAD-AutoDesk, Ukulanda, Zobunjineli
Ukulandela unxibelelwano kwizintlu zokusabalalisa ze-gvSIG, namhlanje ezenze igosa lokugqibela i-1.10, ndafumana indawo enomdla. Le yi-Openarcheology.net, ephakanyiswe yi-Oxford Archeology, ifuna ukukhuthaza ukusetyenziswa kwezixhobo kunye neenkqubo ezikhululekile zokuhlola izicelo kwiiprojekthi ze-archaeological. Isayithi, yezona zininzi ...
Ukulanda, GPS / Izixhobo, GvSIG, Topography